Ifulethi kwindawo entle kakhulu Franca SP - I-Airbnb
Ifulethi kwindawo entle kakhulu Franca SP
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEduardo
Indlu entle, entsha, enefenitshala, kwikhondom ene-24 yeeyure ze-concierge kunye nokhuseleko. Indawo entle kakhulu, kufutshane neCentro, Sesi, Unifacef, Luizalabs. Indawo yaseSanta Cruz izolile kakhulu, inendlela yokuhamba, imarike, ikhemesti, indawo yokuzivocavoca. Ngefanitshala yesiko, i-wifii, i-smart tv, umatshini wokuhlamba, phakathi kwabanye.
Apha uya kwamkelwa kakuhle kakhulu.
Ilungele abo bafuna ukuzola kudityaniswe nokusebenza! :)
Ifulethi elitofotofo, elinefenitshala, amagumbi amabini okulala, enye inebhedi ephindwe kabini enye enebhedi ezimbini zomntu omnye, igumbi lokuhlala, ikhitshi, indawo yokuhlamba impahla, igumbi lokuhlambela, igaraji yemoto enye. I-WiFi, i-smart TV, ilinen yokulala, itawuli, ifriji, i-cooktop, i-debugger, i-oven, i-microwave, i-pan, i-cutlery, umenzi wekofu yombane, i-bauruseira, umatshini wokuhlamba, ibhodi yoku-ayina, phakathi kwabanye ...
Imekobume epholileyo enochuku lobugocigoci.
Ummandla ohloniphekileyo kunye nombindi. Kufuphi neCentro, Clube Sesi, Unifacef, Magalu, Luizalabs. Indawo yaseSanta Cruz izolile kwaye ikhuselekile, inendlela yokuhamba, imakethi, ikhemesti, isikhululo segesi, ivenkile eluncedo, indawo yokuzivocavoca nokunye okuninzi.
Ilungele abo bafuna ukuzola kudityaniswe nokusebenza.
Ngaba uyathandabuza? Nxibelelana ngencoko, whatsapp okanye ifowuni. Kuya kuba luyolo ukukukhonza!